Mugabe na ndị soja mba Zimbabwe na-akparị ụbụbọ
Onye isi ala mba Zimbabwe na ndị soja mba ahụ amalitego ịkparịta ụbụbọ maka ọdịnihu nke mba ha, yana ọnọdụ a ga-edowe Mugabe na mba ahụ, site ugbu a gawa n’ihu. Mkparịta ụbụbọ ahụ were ọnọdụ n’ogige ebe obibi nke onye isi ala mba ahụ, n’obodo Harare.
Nke a na-eme ka o mechara mkpụrụ ụbọchị ole n’ole ndị soja weghara obi ọchịchị mba Zimbabwe n’aka ike. Ndị agha ahụ weghara isi ụlọ ọrụ gọọmenti n’ebe dị ịche ịche. Ha jikpara Mugabe n’ọnọdụ ụkwụ apụna ịro, nke a na-akpọ House Arrest, n’olu bekee.
Ọ bụ gịnị na-ese okwu?
Robert Mugabe, onye nke dị afọ 93 ugbu a, na-achị mba Zimbabwe kamgbe ndị isi ojii weghara ọchịchị mba ahụ site n’aka ndị ọcha, n’afọ 1980.
Ka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Zanu-PF, nke Mugabe na nwunye ya so na ndị isi, malitere ịtụgharị uche maka ịhọpụta onye ga-abụ onye isi ala n’aha otu ahụ, ịzọ yabụ ọkwa daziri n’etiti Emmerson Mnangagwa (osote onye isi ala) na Grace Mugabe (nwunye Robert Mugabe).
N’izu ụka gara aga, Mugabe malitere kwadowe nwunye ya. O mechaziri chụọ Mnangagwa n’ọrụ dịka osote onye isi ala.
Ọgbaaghara malitere dawa na Zanu-PF, yana na mba Zimbabwe. Nka a mere ndị soja jiri wakpozie obi ọchịchị gọọmenti.
Anyị amabeghị ma ebunuche ha ọ bụ ịweghara ọchịchị site n’aka ike. Ndị soja na Mugabe ka na-akparị ụbụbọ. Mana, anyị nụrụ na Mugabe ekwetebeghị ịrịtu n’ọchịchị.